साफ यू-१५ « Lokpath
२०७६, १२ भाद्र बिहीबार १४:१९
Tag: साफ यू-१५
साफ यू-१५ फुटबल: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा
काठमाडौं । साफ यू-१५ पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भुटानलाई पराजित गरेको छ । नेपालले भुटानलाइ ६-० गोलको फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । भारतको
साफ यू-१५: भुटानलाई हराए नेपाल फाईनलमा
काठमाडौं । भारतमा जारी साफ यू-१५ पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपको पाँचौं संस्करण अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले बिहिबार (आज) भुटानसंग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । भारतको कल्याणी रंगशालामा नेपाल र भुटानबीचको खेल
भुटानलाई पराजित गर्दै पुग्ला त नेपाल फाइनलमा ?
काठमाडौं । भारतमा जारी पाँचौं संस्करणको साफ यू–१५ पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत अन्तिम लिग खेल्न नेपालले बिहिबार भुटानको सामना गर्दैछ । भारतको कल्याणी रंगशालामा नेपाल र भुटानबीचको खेल मध्यान्न सवा
साफ यू-१५: नेपाल र बंगलादेश भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । भारतमा जारी पाचौं संस्करणको साफ यू-१५ पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले आज (मंगलबार) बलियो टोली बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । भारतको कल्याणीमा नेपालले तेस्रो खेलको रुपमा बंगलादेशसँग खेल्न लागेको हो
काठमाडौं । साफ यू-१५ पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत दोस्रो खेलमा आज नेपालले श्रीलंकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । पहिलो खेलमा भारतसँग फराकिलो हार व्यहोरेको नेपालले कल्याणी रंगशालामा श्रीलंकाको सामना गर्दैछ । नेपाल